अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ ईतिहास – Hamro24News
July 10, 2021 adminLeaveaComment on अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ ईतिहास
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बीच ब्राजिलले दक्षिण अमेरिकी स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । भोलि आइतबार बिहान ५ः३० बजे प्रमुख प्रतिद्वन्दी अर्जेटिना र ब्राजिलबीच फाइन खेल भएसँगै कोपा अमेरिका प्रतियोगिता समाप्त हुने छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
अजेन्टीना माथी ब्राजिल हावी
दक्षिण अमेरिकी फुटबलका दुई शक्ति राष्ट्रका रुपमा मानिने अजेन्टिना र ब्राजिल १ सय ११ पटक एक आपसमा भिडेका देखिन्छ । जसमा अर्जेन्टिनाले ४० खेलमा जित दर्ता गरेको छ । ब्राजिल ४६ खेलमा विजयी छ । बाँकी २५ खेल बराबरीमा सकिएको तथ्याङ्ग छ ।
आयुश राठौर२०७८ असार २६ गते १८:२१
ब्राजिल र अरजेन्टीनाबिचको पछिल्लो खेल सन् २०१९ को नोभेम्बरमा मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भिडेका थिए । जहाँ मेस्सीको गोलमा अर्जेन्टिनाले जित निकालेको थियो ।
तर अन्तिम पटक मुख्य प्रतियोगितामा दुवै टिम न् २०१९ को कोपा अमेरिकाको सेमिफाईनलमा भिडेका थिए । जहाँ ब्राजिल २–० ले विजयी बनेको थियो । तथ्याङ्कलाई नियाल्दा अजेन्टीना माथि ब्राजिल हावी देखिन्छ तर जारी कोपा अमेरीकाको फईनल खेलमा कसले बाजि मार्ला भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ ।
कोपा अमेरिकाको अन्तिम प्रतिद्वन्दीका रुपमा भेट भएका मेसी र नेयमारमाथि ठूलो चुनौती रहेको छ । व्यवसायिक फुटबल जीवनमा कुनै समय बार्सिलोनाबाट सँगै खेलेका मेसी र नेयमार कोपा अमेरीका२०२०को विजेता बन्ने होडबाजीमा छ । कुनै समय एउटै क्लबबाट खेलेका विश्वव्यापी परिचित यी खेलाडीहरु यतिबेला आफ्नो फरक फरक क्लबबाट खेल्दै आएका छन् ।
६ जना पुरुष र १ जना युवती जंगलमा मृ’त अवस्थामा फेला,हेर्न नसकिने अवस्थामा ?